Infosmada | Nametra-pialana ny filoha lefitry ny CENI, Rakotonarivo Thierry
Nametra-pialana ny filoha lefitry ny CENI, Rakotonarivo Thierry
Samy resy lahatra ny rehetra. « Niaraha-nijery ary nifanarahan’ny teto anivon’ny birao maharitry ny CENI sy Rakotonarivo Thierry, ny tokony hijanonan’ity farany amin’ny andraikitra sahaniny ; fa izany no lalana hanarenana ny tsy mety ary hiverenan’ny filaminana eto Madagasikara izany », hoy ny filohan’ny CENI, Rakotomanana Hery. Nankatoavan’ny birao maharitry ny CENI izany ny fametraham-pialan’ny filoha lefitra, Rakotonarivo Thierry. Notsiahivin’izy ireo tamin’izany fa hamehana noantony nangatahan’ny CENI, ny 05 marsa lasa teo, mba ho eny amin’ny HCC Rakotonarivo Thierry, hitondra ny fiarovan-tenany raha misy izany.
Manolotra olona hisolo azy ny Antenimieram-pirenena
Tsy neken’ny HCC anefa izany, ka naveriny tetsy amin’ny CENI ny antontan-taratasin’ady, tamin’ny 10 marsa lasa teo, mba hampiharana ny And. 88 sy ny manaraka ny fitsipika anatiny eo anivon’ity rafitra misahana ny fikarakarana ny fifidianana ity. « Nangataka tamin’ny HCC izahay mba hilazana fa misy ny fahabangan-toerana », hoy ihany ny filohan’ny CENI. Miangavy ny filohan’ny Antenimieram-pirenena ny CENI mba hikarakara ny fandefasana ny solony.
Tsy fetezana efa an-taona maro
Etsy andaniny, mbola nohamafisin’izy ireo fa tsy manova ny voka-pifidianana natao teto amin’ny firenena ny fisian’ny kara-panondro mitovy laharana ao anatin’ny lisi-pifidianana.
Niaiky izy ireo fa tsy afenina ny fisian’ny kara-panondro mitovy laharana ao anatin’ny lisi-pifidianana. Ilana fitandremana kosa anefa ny famoahana izany mba tsy hiteraka korontana eto amin’ny firenena, araka ny nambarany ihany. « Tsy fototry ny tsy fahatomombanana ny Ceni fa efa fitambarana tsy fetezana nandritra ny taona maro izany. Namoaka azy fotsiny izahay mba hijerena ny vahaolana. Mijoro hatrany amin’ny mangarahara izahay na misy vidiny maharary aza izany », hoy ny filohan’ny CENI, Rakotomanana Hery. Notsiahiviny fa nialoha ny taona 2018 no nivoahan’ny 94,09% amin’ny kara-panondro mitovy laharana.